Ɔmampanyin Putin De Abatete Ho Abasobɔde Ama Yehowa Adansefo
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hungarian Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Mongolian Myanmar Norwegian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie Ɔmampanyin Putin De Abatete Ho Abasobɔde Ama Yehowa Adansefo
NEW YORK​—May 31, 2017 no, Russia Mampanyin Vladimir Putin de “Abasobɔde a Wɔde Hyɛ Awofo Anuonyam” maa Valeriy ne Tatiana Novik. Wɔyɛ Yehowa Adansefo a wofi Karelia, na wɔatete mma nwɔtwe. Wɔyɛɛ saa dwumadi no wɔ Moscow Abankɛse (Kremlin) mu.
Dwumadi yi kɔɔ so wɔ Moscow Abankɛse (Kremlin) mu, da a ade rebɛkye ama wɔadi International Children’s Day.
“Abasobɔde a Wɔde Hyɛ Awofo Anuonyam” yi fii ase May 2008. Ɔmampanyin a na odi ade saa bere no na ɔde ne nsa hyɛɛ ase sɛ wɔnyɛ. Russia aban no de saa abasobɔde yi ma awofo a wɔatete mmofra nson anaa nea ɛboro saa. Ɛsɛ sɛ wɔyɛ awofo a wɔn ani ku wɔn abusua akwahosan ne wɔn nhomasua ho pa ara, na wɔatumi aboa abusua no ma wɔanyin kama wɔ nipadua mu, adwene mu, ne abrabɔ fam. Wobu mmusua a wɔde saa abasobɔde yi ma wɔn no sɛ wɔyɛ nhwɛso pa, na afoforo betumi ahwɛ wɔn asuasua wɔn ama wɔn nso mmusua anya nkɔso.
Ɔmampanyin Putin de “Abasobɔde a Wɔde Hyɛ Awofo Anuonyam” no rema Valeriy Novik a ɔwɔ mma nwɔtwe no.
David A. Semonian a ɔyɛ Yehowa Adansefo kasamafo wɔ wɔn adwumayɛbea ti no kaa abasobɔde no ho asɛm sɛ: “Saa abasobɔde yi, yebu no sɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Bible a Yehowa Adansefo de kyerɛkyerɛ nkurɔfo a wonnye sika biara no, ɛboa awofo ne mmofra ma wɔyɛ ɔman mma pa wɔ baabi a wɔwɔ biara, na ɛnyɛ Russia nkutoo. Gyinae a Russia Aban no asi sɛ wɔbɛtɔn Yehowa Adansefo Adwumayɛbea a ɛwɔ Russia no, July 17, 2017 na Asɛnnibea Kunini no bɛsan asusuw ho. Yɛrehwɛ kwan sɛ saa da no, abasobɔde yi a Ɔmampanyin Putin de maa Yehowa Adansefo no, wɔremmu wɔn ani ngu so.”
Share Share Ɔmampanyin Putin De Abatete Ho Abasobɔde Ama Yehowa Adansefo